Sorona Masina ny 27/03/2020 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 27/03/2020
Salamo 53, 3-4
Andriamanitra ô, vonjeo amin’ny Anaranao aho; omeo rariny amin’ny herinao Andriamanitra ô, henoy ny talahoko; mampandria sofina amin’ny teniko.
Andriamanitra ô, notoloranao ny fanampiana ilainy ny tenanay osa sy malemy, koa mihanta aminao izahay: enga anie ny vokatry ny fanavaozana anay horaisinay amin’ny fo faly sy ravo ary hoentinay manitsy ny toe-piainanay.
Fahendrena 2, 1a. 12-22
Aoka hohelohintsika amin’ny fahafatesana mahafa-baraka izy.
Tamin’ny faniasiavan’ny sainy no nifampilazan’ireo ratsy fanahy hoe: “Ifanakony ny marina, satria manahirana antsika izy, manohitra ny fomba fanaontsika, manîny antsika amin’ny fandikantsika ny lalàna ary manome henatra antsika ho tsy mifanara-toetra amin’izay nampianarana antsika. Mihambo ho manana ny fahalalana an’Andriamanitra izy, ary hataony hoe zanak’Andriamanitra ny anarany. Faniniana ny hevitsika izy ho antsika ary tsy zakantsika na ny mahita azy fotsiny aza; satria tsy mba tahaka ny an’ny olon-kafa ny toe-piainany ary ny lalany hafahafa. Araka ny heviny, isika dia faikan-java-maloto foana, ny fomba fiainantsika fadìny toy ny loto: ny anjaran’ny marina, torîny ho tsara miafara; ary mirehaka ho manana an’Andriamanitra ho rainy izy. Aoka ho zahantsika raha marina ny filazany, ary hodinihintsika izay hahazo azy, eo am-pialana amin’itý fiainana itý. Satria raha zanak’Andriamanitra ny marina, dia arovan’Andriamanitra izy, ary hoafahany amin’ny tanan’ny fahavalony. Ka sedrao amin’ny latsa amam-pijaliana izy hoe, hahitana izay fandeferany, hitsapana izay faharetany! Helohy ho faty amin’ny fahafatesana mahafa-baraka izy, satria araka ny filazany dia hoahîn’Andriamanitra izy.”
Izany no hevitr’izy ireo; diso hevitra anefa izy; fa jamban’ny haratsiany. Tsy mahalala ny hevi-miafin’Andriamanitra izy, tsy manantena valisoa noho ny fahamasinana; ary tsy mino fa hisy valisoa ho an’ny fanahy madio.
Salamo 33, 17-18. 19-20. 21 sy 23
Fiv.: Ny Tompo eo anilan’ny torotoro fo.
Ny tavan’ny Tompo amin’ny mpanao ratsy, mba hahavery tadidy azy eto an-tany. Ny olo-marina vao miantso dia henon’ny Tompo. Ny ahiahiny rehetra esoriny aminy.
Ny taolany ambenany avokoa, ka tsy ahatapahana iray akory. Ny fanahin’ny mpanompony avotan’ny Tompo; tsy hisy ho voasazy izay mifefy aminy!
Izaho no fananganana ny fiainana, hoy ny Tompo; izay mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay.
Jo. 7, 1-2. 10. 25-30
Nitady hisambotra Azy izy ireo, nefa mbola tsy tonga ny fotoany.
Tamin’izany andro izany, i Jesoa nitety an’i Galilea fa tsy nety nankany Jodea, satria nitady hahafaty Azy ny Jody. Ary efa akaiky ny fetin’ny Jody atao hoe fetin’ny Tranolay. Kanjo nony lasa ny rahalahiny, dia mba niakatra hamonjy ny fety ihany koa Izy, saingy tsy nisehoseho, fa toa niafinafina. Tamin’izay, dia nisy mponina sasany tao Jerosalema nanao hoe: “Moa tsy Izy io ilay tadiavin-dry zareo hovonoina? Ary nahoana no miteny ampahibemaso Izy io, ka no tsy misy sahy miteny Azy akory? Sao dia efa fantatry ny loholona kosa fa io no i Kristy? Ny niavian’Izy io anefa fantatsika; fa ny hiavian’i Kristy kosa tsy misy hahalala rahefa tonga Izy.” Dia niantso àry i Jesoa tao am-pampianarana tao amin’ny Tempoly ka nanao hoe: “Fantatrareo Aho, ary fantatrareo koa izay niaviako. Nefa tsy tonga ho Ahy Aho, fa marina Ilay naniraka Ahy, fa tsy fantatrareo. Izaho no mahalala Azy, satria Izy no niaviako, ary Izy no naniraka Ahy.”
Tamin’izay dia nisambotra Azy ny olona, kanefa tsy nisy sahy nitana Azy, satria tsy mbola tonga ny fotoany.
Ry Andriamanitra Andriananahary ô, ny herin’izao Sorona masina izao anie hanafaka anay amin’ny ratsy ka handio anay bebe kokoa hatrany ho tody any aminao loharano niaviana.
Ny Ran’i Kristy no ahazoantsika ny fanavotana sy ny famelàna ny fahotantsika araka ny herin’ny fahasoavany.
Mihanta aminao izahay, ry Tompo: enga anie ho tahaka ny ialanay amin’ny fomba taloha ho an’ny fiainam-baovao no handaozanay ny toetra ratsy mahazatra ka hanamasinanao sy hanavaozanao ny fonay.